HomeArimaha QoyskaWaa Maxay Sababta Ay Dhalinyartu Uga Cabsadaan Guurka?
Baqdinta ama Cabsida laga qabo Guurka ama waxa lagu magacaabo “Gamophobia” ayaa si weyn ugu faafay dhalinyarada adduunka gaar ahaan kuwa soo maaliyeed waxana jirta in ay dhalinyaradu badan oo ka cabsi qabto guurka waliba uga fogaanayaan wado walba oo ay awoodaa.
Baqdintaan ama Cabsidaas ayaan ku xidhnayn dumarka laakiin waxa uu sidoo kale ku faafay dhanka wiilasha taas oo khatar weyn ku ah dhalinyarada hadii ay yihiin dumar iyo ragba.
Waa Maxay Sababta Ay Raggu Uga Cabsdaan Guurka?.
Sababta ugu weyn ama ugu muhiimsan ee ay Raggu uga cabsadaan guurka ayaa ah in uuna si weyn u qaan-gaadhn waliba aan gaadhin wakhtiga uu ku qaadi lahaa masuuliyada guurka.
Qaan-gaadhka ayaan kaliya ahayn dhanka da,da laakiin sidoo kale qaan-gaadhka caqliga iyo Nafsi ahaan.
2.Awood La,aan Dhanka Dhaqaalaha:
Yaraanta awooda dhaqaale ayaa door muhiim ah ka qaadata in ay Raggu ku dhici waayaan guurka.
Cadaadiska Runta ee Ragga ayaa sidoo kale door ka qaata cabsiga ay Raggu ka qabaan guurka iyaga oo ka cabsi qaba dalabka uga iman doona qoyska gabadha uu guursanayo.
Cabsida uu ka qabo masuuliyada gurigiisa kadib guurka hadii ay noqoto masuuliyada caruurtiisa iyo xaaskiisa.
Qaar Ka Mid Ah Fikradaha Khaldan:
Waxa jira fikrado khaladan oo ay Raggu ka aaminsanyihiin guurka taas oo guurka uga dhigta mid karaahiyo ah.
Guurka ayaa Ragga qaarkood u ah in uu ka xidhayo xoriyadooda iyo waliba in uu ka hor istaagayo muraadkooda gaarka ah.
Taas oo keenta in ay doorbidaan nolol guur la,aan ah taas oo ka caawinaysa in uu ku jiro nolol bilaa xidhiidh ah.
Cadaadiska Ragga ee dhanka dumarka iyo masuuliyada guurka ayaa sidoo kale door kale oo muhiim ah.
Marar badan baqdinta Ragga ee guurka ayay sabab u tahay cadaadiska dumarku saaraan Ragga.
Taas oo keenta in ay Raggu guud ahaan ka laabtaan rabitaanka guurka.
4.Kala Dunaanshaha Qaabka Fikirka Labada Dhinac:
Kala duwanaanshaha weyn ee dhanka fikirka, rabitaanka iyo qorshaha Mustaqbalka ee Ragga iyo Rumarka ayaa sidoo kale sabab u ah baqdinta Ragga iyo dumarka ee guurka.
Gaar ahaan hadii uu kala duwanaanshahaas yahay mid ku xidhan noloshooda iyo waliba wakhtiga munaasibka ah ee ay Aqal galayaan iyo dhanka ubbadka.
5.In Uuna Labada Dhinac Mid Ka Mid Ah Gabi Ahaan Ku Qanacsanayn Qofka Kale:
In uuna Ninku ku qanacsanayn Gabadha sidoo kale in ayna Gabadhu ku qanacsanayn Ninku in uu yahay midka ay la wadaagi lahayd nolosheeda ama uu la wadaagi lahaa noloshiisa ayaa sidoo kale ah in ay Gabadhaha iyo Ragguba ka cabsadaan guurka.
Waxa Muhiim ah in labada qof ee doonaya guurku in uu midba ku qanacsanaado midka kale waliba midba caawiyo midka kale si uu qof walba u ogaado waxa uu ka doonayo qofka uu la wadaagayo nolosha.
Sababaha Ay Dumarku Uga Cabsadaan Guurka:
Doorka Dumarka ee guurka ayaa Waligeed ahayd ahaa door aad u weyn iyaga oo qaadi jirtay Masuuliyada sida korinta caruurta, ka shaqaynta guriga iyo waliba daryeelka gacaliyeheeda marka uu shaqada ka yimaado.
Arintaas ayaan Casrigan haatan waxba iska badalin iyada oo ay waliba ugu biirtay waxyaabaha ay noloshu ka dalbanayso dumarka sida shaqadeeda shaqsiga ah oo ay u raacsantahay in ay qabato shaqadeeda guriga sida korinta caruurta, ka shaqaynta guriga iyo waliba daryeelka gacaliyeheeda.
Sidaas darteed guurka ayaa dumarka ku noqday Masuuliyad ka badan ama dhaafsan awoodeeda taas oo baqin weyn ku abuurta.
2.Kor u Qaadista Hamiga Nolosha:
In ay gabadhu kor u qaado Hamiga nolosha ee ay la doonayso gacaliyeheeda mustaqbalka ayaa ah sababaha ugu weyn ee ay uga cabsadaan guurka.
Inta badan dumarka ayaa Shuruudo sare ku xidha doorashada gacaliyeheeda waxaa ay Shuruudahaas ka raadinaysaa Nin walba oo ay la kulanto laakiin marka ay waydo ayay noqonaysaa in ay ka niyad jabto iskana dhaafto raadinta taas oo keenaysa cabsi guurka ah.
3.Khibrado Ayna Horay Ugu Soo Guulaysan:
Baqdinta ay dumarku ka qabaan guurka ayaa keeni karta fashil hore ee oo ay horay gabadhu ugu soo fashilantay guur hore.
Waxana laga yaabaa in ay sidoo kale gabadhu ku soo dhibaatootay arimo dhanka qoyskeeda ah taas oo arin Nafsi ahaan ah ku keenaysa gabadha taas oo ku abuuraysa cabsi ay ka qabto Guurka.
Waa Maxay Masayrku (Hinaase), Nooca Masayrka, Sababaha Keenta Masayr-ka & Qaabka Aad U Daawayn Karto.